Liiska Masuuliyiinta Madaxweyne Trump Xilalka Muhiimka ah ka Eryey 6 Bilood Gudahood iyo Sababaha | Maankaab.com
Washington (BBC/MK)- Lix bilood ayaa laga joogaa markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Maraykanka Mr. Donald Trump, waxaannu xilalka ka eryey ama cadaadis dartii shaqada uga tagay masuuliyiintii ugu tirada badnaa ee laga caydhiyo xafiisyada ugu muhiimsan Aqalka Cad iyo guud ahaan dawladda Maraykanka muddo sannad ka yar.
Xubnaha muhiimka ah ee xayndaabka maamulka Madaxweyne Trump degdegga uga baxay waxa ugu dambeeyey Anthony Scaramucci oo ahaa Agaasimaha Warbaahinta Aqalka Cad, xilkaasna hayey muddo 10 maalmood ah oo keliya.
Haddaba, waxa aan halkan ku soo taxaynaa liiska masuuliyiinta Madaxweyne Trump shaqada ka eryey ama iyagu xilalka iska casilay iyo sababaha loo cuskaday muddada kooban ee uu hoggaaminayey dalka adduunka ugu awoodda badan ee Maraykanka.
Anthony Scaramucci, Agaasimihii Warbaahinta Aqalka Cad:
Waxa uu ahaa taageerayaasha ugu waaweyn ee Trump markii lagu jiray ololaha doorashadii Maraykanka ee sannadkii hore, 10 maalmood ka hor ayaana xilka Agaasimaha Warbaahinta Aqalka Cad loo magacaabay.
Waa nin caan ku ah xagga dhaqaalaha, gaar ahaan suuqa saamiyada ee Wall Street, halkaas oo uu ka mid ahaa dadka macaashka badan ka sameeyey ee ka tilmaaman.
Inkasta oo aannu shaqada ku raagin, haddana waxa uu warbaahinta u sameeyey cinwaanno waaweyn intii yareyd ee uu shaqada joogay.
Sheekooyinkii ugu waaweynaa ee laga qorey waxa ka mid ah farriin uu dhigey boggiisa Twitter-ka oo loo fasirtay inuu ku eedeynayey Agaasimaha Aqalka Cad Reince Priebus masuuliyadda wararka sirta ah ee hoosta looga dusinayo saxaafadda. Balse markii dambe waa uu tirtirey qoraalkaas.
Sababta shaqada looga eryey:
Inkasta oo uu ku faanay inuu si toos ah uga amar qaato madaxweyne Trump, oo aannu hoos tagin Agaasimaha Aqalka Cad, haddana waxa laga yaabaa in taasi ay ugu wacan tahay sababta Agaasimaha cusub Jeneraal John Kelly uu xafiiska uga eryey Scaramucci.
Shaqo-ka-tagista Scaramucci waxaa la shaaciyey saacado uun kadib markii xilka Agaasimaha Guud ee Aqalka Cad loo magacaabay Jeneraal Kelly oo hore u ahaa Wasiirka Amniga Gudaha ee Maraykanka.
Madaxweyne Trump ayaa la sheegay in uu qoonsaday hadal Scaramucci bartiisa Twitter-ka ku qorey.
Waxaa xilka laga direy taariikhda markii ay ahayd 31-kii July 2017 oo ku beegnayd Isniintii toddobaadkan.
Reince Priebus, Agaasimahii Aqalka Cad:
Waxa uu hore u ahaa Guddoomiyaha Guddiga Qaran ee Xisbiga Jamhuuriga, wuxuuna ka mid ahaa dadka tirada yar ee siyaasiyiinta reer Washington ah ee xilka sare ka helay Aqalka Cad ee Trump, balse waa ay u suurtogali weyday in uu hanto shaqada.
Waxa uu la tacaalayay awoodaha is-diiddan ee ku dhex loollamayey Aqalka Cad, oo ay ka mid ahaayeen gabadha madaxweynuhu dhalay ee Ivanka iyo wiilka uu soddogga u yahay Mr. Jared Kushner.
Waxa xaalka uga sii daray markii Agaasimaha Warbaahinta ee Aqalka Cad loo magacaabay Scaramucci oo ay si shaqsiyan isugu dhacsanaayeen, kaas oo markii dambe diidey in uu ka amar qaato.
Sababta loo eryey:
Madaxweyne Trump ayaa la sheegey inuu lumiyey kalsoonidii uu ku qabay Priebus, wuxuuna soo xushey nin jeneraal ah si uu ugu badalo.
Waxa kale oo xiiso lahayd xiliga la eryey in ay ku soo beegantay waqti Xisbiga Jamhuurigu ku guuldarraystey in uu meesha ka saaro sharciga caymiska caafimaadka Obama.
Waxa uu xilka hayey muddo 6 bilood ah, waxana shaqada laga fadhiisiyey 28-kii July.
Sean Spicer, Afhayeenkii Aqalka Cad:
Wuxuu ahaa ninkii ugu caansanaa dawladda Trump, wuxuuna ahaa ninka maalin kasta warbaahinta soo horistaagi jirey si uu u difaaco siyaasadaha Donald Trump.
Waxa uu si weyn ugu sii caanbaxay kadib markii barnaamijka majaajillada siyaasadeed ee lagu magacaabo Saturday Night Live uu ka sameeyey jilliin maad ah oo isaga lagu canjilayo.
Sababta uu xilka uga tagay:
Sean Spicer isaga ayaa xilka iska casiley, iyadoo sida la sheegey uu arrintaasi isfaham wanaagsan kala gaadhay madaxweyne Trump si ka duwan dadkii kale.
Waxa uu xilka ka dagay isla markii Agaasimaha Warbaahinta ee Aqalka Cad loo magacaabay Scaramucci, tallaabadaas oo uu Spicer ka biyo diidsanaa.
Gabadha lagu magacaabo Sarah Huckabee Sanders oo ku-xigeenkiisa ahayd ayaa buuxisey booskiisa.
Waxa uu xilka hayey muddo lix bilood ah, wuxuuna xilka isaga dagay 21-kii July.
James Comey, Agaasimihii FBI:
Comey waxa uu kaalin muran badan dhalisey ka ciyaaray maalmihii ugu dambeeyey ee doorashadii Maraykanka sannadkii hore.
Xisbiga Dimoqraadiga ayaa ku eedeeyey eex siyaasadeed, kadib markii uu dacwad ku furay Hillary Clinton toddobaad uun ka hor maalintii codbixinta doorashada loo dareerayey. Tallaabadaas awgeed ayuu Trump ammaan badan ugu jeediyey Comey.
Hase ahaatee, markii Comey baadhitaan ku furey Trump laftiisa eedeymo ku saabsan lugtii Ruushka ku lahaa ololihii doorashada ee Trump, ayuu madaxweynuhu aad u qoonsaday Comey.
Sababta xilka looga eryey:
Maamulka Trump ayaa ku sheegay sababta Comey xilka looga eryey inay ahayd inuu si xun u maamulay baadhitaanka fadeexaddii emaillada ee Hillary Clinton, sidaa darteedna aannu awood u lahayn in uu xilkaas sii hayo.
Balse markii dambe hadallo isburinaya ayaa ka soo baxay Aqalka Cad, waxana ka mid ahaa in sababaha loo eryey arrimo salka ku haysay baadhitaannada fadeexadda Ruushka.
Waxa uu xilka hayay saddex sanno iyo siddeed bilood, isaga oo afar bilood uun ka hoos shaqeeyey xukunka Trump, ka hor intii aan la eryin 9-kii bishii May ee sannadkan.
Michael Flynn, La-taliyihii Amniga Qaranka Maraykanka:
Jeneral Michael Flynn isaga ayaa xilka iska casiley, balse madaxweynaha ayaa ka codsaday taas, kadib toddobaadyo ay socotey fadeexad ku saabsan in Flynn been ka sheegey kulan iyo xidhiidh uu la sameeyey safiirka Ruushka ee Maraykanka Sergei Kislyak.
Waxa la sheegey in uu safiirka kala hadlay arrimo la xidhiidha cunaqabatayn Maraykanku hore u saaray Ruushka.
Sababta uu xilka uga dagay:
Waa arrin sharci-darro ah in dadka muwaaddiniinta ee Maraykanka ay farogeliyaan arrimaha diblomaasiyadda ee dalkooda, sidaa darteedna markii la ogaaday in Flynn xidhiidh la sameeyey safiirka Ruushka, wax su’aal ah kama taagnayn in uu xilka iskaga tago.
Waxa uu xilka hayey 23 maalmood oo kaliya, wuxuuna ka dagay 14-kii February 2017.
Michael Flynn wuxuu noqdey qofkii waqtigii ugu yaraa hayey xilka La-taliyaha Amniga Qaranka Maraykanka.
Sally Yates, ku-simaha Xeer-ilaaliyaha Guud:
Madaxweynaha ayaa xilka ka eryay gabadhan oo lagu magacaabo Sally Yate,s kadib markii ay su’aal ka keentey amarkii Trump ee mamnuucista socdaalka dadka ka soo jeeda 7 dal oo muslimiin ah.
Yates oo uu hore u magacaabay madaxweyne Barack Obama ayaa sheegtey in ay tahay arrin takoor ah in muslimiintaas loogu diido socdaalka diintooda darteed.
Sababta xilka looga qaaday:
War qoraal ah oo ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegey in Sally Yates ay hagardaamaysay wasaaradda caddaalada kadib markii ay diidey in ay dhaqangaliso amar lagu difaacayo amniga dadka Maraykanka.
Waaa shaqada laga caydhiyey 31-dii January ee sannadkan, 10 maalmood uun kadib markii uu xilka la wareegey Donald Trump.
Preet Bharara, Dacwad-oogaha heer Federaal ee New York:
Waa wax qeyrul-caadi ah in dacwad-ooge madaxweyne hore magacaabay xilka laga qaado marka uu madaxweyne cusub xafiiska yimaad, iyada oo ay sidaas tahay ayaa haddana madaxweyne Trump u sheegay Mr. Preet Bharara in uu xilkiisa haysan doono.
Ninkan ayaa sumcad badan ku yeeshey, kadib markii uu tallaabooyin sharci ah ka qaaday ganacsato badan oo galay dambiyo maaliyadeed.
Markii xilka laga qaadayay waxa uu gacanta ku hayay dacwado waaweyn oo midood ay la xidhiidho duqa magaalada New York Mr. Bill de Blasio.
Mr. Bharara waxa uu ka mid ahaa 46 dacwad-ooge oo Trump ka dalbaday in ay xilka ka dagaan, balse Xisbiga Dimoqraadiga ayaa sheegey in si gaar ah loo eeganayey Bharara, maadaamaa meelaha xukunkiisa gaadhsiisan yahay ay ka tahay xaafadda New York oo uu ku yaal dhismaha Trump Towers, taasina madaxweynaha welwel galisey.
Markaa kadib waxa soo baxday in ninkani baadhitaan ku hayay shirkadaha Trump.
Waxa uu xilka hayay toddoba sanno iyo toddoba bilood, isagoo wax ka yar laba bilood ka hoos shaqaynayey madaxweyne Trum oo xilka ka qaaday 11-kii March 2017.
Paul Manafort, Agaasimihii Ololaha Doorashada Trump:
Waxa loo xilsaaray in uu maareeyo qalalaasihii ku furnaa ololihii doorashada ee Trump, balse isagii ayuu galaaftay kama dambeystii.
Waxa xilka laga eryey markii uu 5 bilood oo keliya xilka agaasimenimada hayey.
Kooxda Trump ma aysan sheegin sabab cad oo xilka lagaga qaaday, marka laga reebo in ay soo saareen warsaxaafadeed guul loogu rajeeyey.
Balse warar saxaafadda ku soo baxay maalmo ka hor intii aannu xilka ka dagin, ayaa tibaaxay in uu heley lacago sharci-darro ah oo uu ka helay dad xidhiidh la leh Ruushka.
Waxa kama dambeys xafiiska laga diray 19-kii August 2016.